Samsung na-ewetara Galaxy XCover 5: ama ekwentị niile | Gam akporosis
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ smartphones ruru ahịa na afọ ndị na-adịbeghị anya, na-eguzogide ọgwụ Na-agbapụta mmiri na ájá, ha anaghị ama jijiji belụsọ ma i jiri mkpuchi pụrụ iche. Maka ndị ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ nwee obi ụtọ n'èzí na ọnọdụ pụrụ iche Samsung nwere XCover 5.
Ihe ọhụrụ Samsung XCover 5 nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara, emepụtara maka ọrụ ubi dị ka ụlọ ọrụ, ihe owuwu, okwute, maka ndị na-eme egwuregwu ... ebe ihe ọghọm ọ bụla ma ọ bụ ọdịda nke ekwentị ọ nwere ike ịpụta ịtụfu ya ozugbo na ahịhịa.
Ihe XCover na-eguzogide mmiri nke ihe ruru mita 1,5 ma na-enye IP68 mmiri na uzuzu uzuzu, nke na-enye anyị ohere mikpuo ọnụ maka nkeji iri atọ n'ihe karịrị otu mita mmiri, ọ gụnyekwara ihe MIL-STD810H asambodo ndị agha.
Na mgbakwunye, ọ na-etinye ihe Samsung kpọrọ uwe aka, site na nke a na-eme ka mmetụ aka nke ihuenyo dị elu iji nye nzaghachi ka ukwuu na gburugburu ebe obibi. Na ihuenyo ruru 5,3 sentimita asatọ na HD mkpebi.
Ọ nwere Push na-ekwu okwu, iji na-akpọtụrụ na bọtịnụ nke bọtịnụ, guzobe otu ọrụ maka igodo anụ ahụ ọ bụla (oku mberede, tọọchị, map ...) na Samsung Knox na-echebe ya.
N'ime, anyị na-ahụ ihe nhazi ahụ Exynos 850 tinyere 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Batrị 3.000 mAh bụ edochi na dakọtara na ngwa ngwa odori. N'ime, anyị na-ahụ gam akporo 11
La igwefoto azụ na-agụnye ihe mmetụta 16 MP nwere oghere nke f 1.8. Na ihu, anyị na-ahụ igwefoto 5 MP n'ihu ya na oghere nke f 2.2. O nwere mgbawa NFC. N'oge a amaghị ọnụahịa ahụ.
Ọhụrụ ọhụrụ a ga-abịa Europe, Eshia na Latin America n’otu ọnwa a nke March.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung weputara Galaxy XCover 5: ama ama ama ama
[Na vidiyo] Otu esi ekekọrịta faịlụ ngwa ngwa site na ịbanye na mobiles abụọ